IYangon Airways: Iphethwe ngabathengisi beziyobisi kunye nokwanda ngenxa yetekhnoloji entsha yaseFrance?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IYangon Airways: Iphethwe ngabathengisi beziyobisi kunye nokwanda ngenxa yetekhnoloji entsha yaseFrance?
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseMyanmar • iindaba • Technology • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
IYangon Airways yasekwa ngo-Okthobha u-1996 njengenqwelomoya yenqwelomoya yasekhaya kumdibaniselwano phakathi kweMyanma Airways, inkampani ephethe iflegi yaseburhulumenteni eMyanmar, kunye neKrong-Sombat Inkampani yaseThailand. Inqwelo moya yabeka ikomkhulu layo kunye nesikhululo solondolozo eYangon. Ngo-Okthobha u-1997, umnini wenqwelomoya ngoku wafumana isabelo senkampani yase-Thai emva koko wafumana isabelo se-Myanma Airways ngo-2005. Emva koko, i-airline yaba yeyabanini babucala ngokupheleleyo eMyanmar. I-airline emva koko yajika yaba yinkokheli yenqanawa yenkonzo yasekhaya, ishedyuli yokusebenza kunye neenkonzo zokuhamba ngenqwelo moya ukusuka eYangon ukuya kwiindawo eziphambili zorhwebo nezokhenketho eMyanmar. Kule minyaka mithathu idlulileyo, iYangon Airways ibisoloko ifumana isabelo sentengiso; ine-13% ngo-37 kwaye inyuke yaya kwi-2007% ngo-41.
Enye inqwelo moya ebizwa ngegama elifanayo iYangon-Airways ithi kwiwebhusayithi yabo www.yangonair.com ukuba www.yangon-airways.com, ayihambelani neYangon Airways Ltd. Inkampani yenqwelomoya ithi inqwelo moya yeyase-ECCR Travel engasasebenziyo yiYangon Airways 'General Agent Agent. “Asinakuluthatha uxanduva lwalo naliphi na itikiti okanye ukubhukisha kule webhusayithi.
Kuyadideka xa kungacaci ukuba zeziphi inqwelo moya ezimbini ezinegama elifanayo ezidweliswe yi-United States Isebe likaNondyebo wee-Ofisi zoLawulo lweeMpahla zaNgaphandle (OFAC) kuLuhlu lwaBantu abachongiweyo ngokukhethekileyo kunye naBantu abaThintelweyo (SDN). Phantsi komthetho waseMelika omanyeneyo, amaMelika akavunyelwe ukwenza ushishino nabantu okanye amaziko adweliswe njenge-SDN. IYangon Airways yachongwa yi-OFAC ngo-2008 emva kokuba ifunyenwe ngabarhwebi abadumileyo beziyobisi zomkhosi wase-United Wa.
IYangon Airways ifudukele kwiZenith® PSS (Inkqubo yeNkonzo yaBakhweli), ebonelelwa yi-TTI (iTekhnoloji yeTekhnoloji yokuHamba).
Umnumzana Aung Min Khaing uqhubeke wathi, 'Ukuya kwi-Zenith® PSS linyathelo lokuqala njengenxalenye yenkqubo yethu yokwandisa ishishini, apho siza kunyusa ukufikelela kwethu kwintengiso, ukunxibelelana neearhente zokuhamba ezikwi-Intanethi ngeZenith® API kwaye, nathi kuthathelwa ingqalelo iCodeshare kunye ne-Interline, eya kuthi isenzele iZenith®. Ubukho obude nobuphumelele be-TTI eMyanmar buzisa inzuzo enkulu kwiYangon Airways. '
Umnumzana Gregoire Echalier, uCEO we TTI uthe, 'Kube luchulumanco olukhulu ukusebenza neqela leYangon Airways kule mfuduko ibalulekileyo, inkuthalo nobuchule babo obuyimizekelo.'
Ngokuka-Paul Martin, isithethi esimalunga noluntu kwi-TTI i-airline ayithathi makhadi etyala anokubangelwa kukungakhathali e-US.
U-Echalier uqhubeke wathi, 'Siyavuya ukuba yinxalenye yohlumo lweYangon Airways, sibenza bakwazi ukwandisa ukufikelela kwabo kwintengiso kunye namandla abo okusebenza kunye nentsebenziswano nezinye iiAirlines. I-TTI inabaThengi abaninzi beenqwelo moya kwiZenith® eMyanmar, kangangeminyaka ethile ngoku, isongeza iYangon Airways kwisiseko sethu seZenith Customer ibonisa ubuchule bethu bokulawula ishishini lePSS / IT kwiAirlines eMzantsi Mpuma Asia.
Itekhnoloji yeTekhnoloji yokuHamba iQela eliSebenzayo yinkampani esekwe kwilizwe laseFrance. Ngumboneleli wesisombululo kumzi-mveliso wezothutho lomoya, okhethekileyo kwisoftware ye-IT yokulawulwa kweenqwelo moya